Ndi China na ndi oru ihe nlere nke China | qiangjing
Okwu a na - ekwuchi akwa aka na - ezo aka na akwa nke ejiri kpuchido nkwonkwo nkwojiaka. Na ọha mmadụ nke oge a, onye mkpuchi nkwojiaka bụ otu n'ime ngwaọrụ egwuregwu dị mkpa maka ndị na-eme egwuregwu.
Agba: otutu agba ma ọ bụ nwee ike ịhazi ya
Ọrụ: chebe nkwojiaka na mmerụ ahụ, nye mgbakwunye dị mma
Okwu a na - ekwuchi akwa aka na - ezo aka na akwa nke ejiri kpuchido nkwonkwo nkwojiaka. Na ọha mmadụ nke oge a, onye mkpuchi nkwojiaka bụ otu n'ime ngwaọrụ egwuregwu dị mkpa maka ndị na-eme egwuregwu. Nkwonkwo anụ ahụ bụ akụkụ ahụ mmadụ na-emegharị ọtụtụ oge, ọ bụkwa otu n'ime akụkụ kachasị emetụta. Ohere nke ndị na-eme egwuregwu tendonitis na-akụ na nkwojiaka dị elu. Iji chebe ya pụọ ​​na mmerụ ahụ ma ọ bụ gwọọ ngwa ngwa, iji mkpịsị aka mee bụ otu ụzọ dị mma.
Ejiri nkwonkwo nkwoji egwuregwu mee otu ihe, nke nwere ike iwusi akụkụ aka aka ike, welie nkwụsi ike, ma belata nkwusi ike na ike nke nkwonkwo ụkwụ site na mmega ahụ ogologo oge: mgbakwunye nke nkwojiaka mgbe mmesịrị ọgwụgwọ pụrụ iche belata mgbochi nchedo ahụ mgbe ị na-eyi, belata esemokwu dị n’agbata ọnụ nke ọkpọ aka egwuregwu na anụ ahụ: candị mpempe windo na-anaghị enwe ike idozi dịka mkpa onwe onye si dị, kamakwa zuru ike oghere mmegharị nke nkochi, nke agaghị emetụta mmegharị aka niile nke aka gị.
Ọrụ mbụ nke nkwado aka bụ ịnye mgbali ma belata mgbacha; nke abụọ bụ igbochi mmegharị ma kwe ka mpaghara merụrụ ahụ gbakee. N'otu oge ahụ, ọ kachasị mma ịghara igbochi ọrụ aka nkịtị, yabụ ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa, imirikiti nkwojiaka kwesịrị ikwe ka mmegharị aka na-enweghị atụ.
Ndị mmadụ na-enwe mmasị igwu egwu tenis, badminton, tebụl tebụl, mgbe ha gbachara bọl, ọkachasị mgbe ị na-egwu azụ, nkwojiaka ga-afụ ụfụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na itinye akwa aka n'apata ụkwụ ga-afụ ụfụ, ndị ọkachamara na-agwa anyị na nke a bụ ihe a na-akpọkarị "ihe egwuregwu tennis". Ihe aka a agbị agbatị ga-abụ n’oge a n’ịkụ bọl, nkwonkwo aka aka adịghị agbagide, ọkpọchi akpọchi, akwara aka nke ogwe aka ya karịrị akarị, na-emebi mbibi mgbakwunye, nkwonkwo aka aka echekwara. A ka nwere mgbatị gabigara ókè mgbe ị na-akụ bọl ahụ, ka mmebi nke nkwonkwo ụkwụ wee dịkwuo elu. Yabụ mgbe ị na-akpọ tenis, ọ bụrụ na obi gị na-egbu mgbu, ọ kacha mma ka ị yie brads wrist mgbe ị na-etinye pad. Ma mgbe ị họọrọ bra nkwado aka gị, ị ga-ahọrọ nke n’enweghi ihe ọ bụla. Sticgba mbọ dị oke oke iji chebe ya. Ejikwala ya aka ike ma ọ bụ daa nke ukwuu, na -eko oke ga-emetụta nrugharị ọbara, ọ ga -eme ka ọ tọghe nke ukwuu. Uru dị iche iche maka ihe nkwado bọọlụ: Ọ nwere oke nkọcha, iku ume yana nnabata mmiri. Gbochie mmerụ ahụ nkwonkwo aka. Mee nkwonkwo aka aka. Ọdịdị mara mma. Ihe nkasi obi. Gosipụta ụdị egwuregwu ahụ nke ọma. Ọ dị mfe ịsa ahụ. Maka ahụike: obere ego. Ọ ga-abụ nnukwu uru. Atụmatụ maka nkwado aka: 1. A na-eji akwa aka na-eme mkpịsị aka ogologo, nke nwere ike ịrapagidesi ike na mpaghara a na-eji egbochi mmerụ ahụ, belata ihe mgbu na mpaghara emetụtara, ma meekwa ka ọ gbakee ngwa ngwa. 2. Kwalite mgbasa ọbara: Mee ka ọbara na - eme ka akwara ndị mmadụ sie ike n'ọhịa. Mmetụta a bara ezigbo uru na ọgwụgwọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo na mgbu nkwonkwo. Na mgbakwunye, ịmịnye ọbara nke ọma nwere ike rụọ ọrụ ọfụma nke akwara ma belata ihe mmerụ ahụ. 3. Mmetụta nkwado na nkwụsi ike: Nkwonkwo aka aka nwere ike mee ka nkwonkwo na akwara dị ike iji guzogide mmetụta nke ike mpụga. Chebe nkwonkwo na akwara.
Nkuzi Nkwado Akwukwo Nso nke nkwojiaka
Etu esi eji ihe nkwado aka mee ihe n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụrụ na ịrịọ m ka m tụọ akụrụngwa ọzụzụ, mgbe ahụ maka novices, eriri ukwu na nkwado aka na-ezuru.
Taa anyị na-ekwu maka nkwado aka.
Ihe karịrị 99% ndị mmadụ na-emehie ihe kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị nchekwa wrist na-enye ezigbo nchebe mgbe anyị tiri oke ibu, kama ọ na-emekwa ka nkwụsi ike nke nkwonkwo aka aka anyị ike n'oge ọ bụla. Ihe dị mkpa nke nkwojiaka m kwenyere na onye ọ bụla maara na ozugbo nkwonkwo aka ahụ merụrụ ahụ, enweghị ike ịmegharị mmegharị nke isi. Mgbe anyị na-eme mmegharị na -eme mkpịsị aka ukwu, a na-etinye ibu ahụ na nkwojiaka maka nkwado. Mgbe ị na-eji oke ọzụzụ dị ukwuu, ma ọ bụ ike gwụchara gị nke ukwuu, yana itinye uche n'ihe siri ike itinye uche, ọ nwere ike ime ka nkwojiji maa jijiji na enweghị ike idozi ya. N'ọnọdụ kwụ ọtọ, akpa aka nwere mmerụ nwere ike ime ma ọ bụrụ na mmadụ akpachapụghị anya ma ọ bụ na tenosynovitis nwere ike ịdabara n'ihi omume iji ogologo oge. Banyere iji nkwojiaka, ọtụtụ mmadụ na-etinye aka na isi mkpịsị aka ukwu, wee kechie nkwojiaka maka ugboro 3-5, mana nke ahụ ezighi. M ga-ekwu maka ọnụ ụzọ ugbu a: Nke mbụ, tinye isi mkpịsị aka ahụ na oghere ahụ, wee kechie ya n'akụkụ ntọala nke nkwụ ahụ ruo mgbe ọ kechiri nkwojiaka. Enwekwu ike na-ebuli elu anaghị ekwe ka mmerụ ahụ aka 2 cm dị elu karịa nkwonkwo nkwojiaka. Nnukwu eriri ọnụ ga-eme ka barbell kpọtụrụ wristband ma mee ka ọduọ daa ngwa ngwa. Yabụ, anaghị atụ aro imetụ aka na mbọ aka aka, ọ bụrụhaala na enwere ike idozi mgbọrọgwụ na mbọbọ aka. Banyere njikwa nke isi mkpịsị aka ukwu ahụ, kechie ya ma ọ bụ ejighi ya dị ka omume gị si dị, emela ya anya na nke a. Debe ụkpụrụ mgbe ị na-aga windo, ịchọrọ inweta enyemaka siri ike karị, nkwojiaka kwesịrị ịdị nkọ dị ka o kwere mee n’enweghi ihe mgbu, nke pụtara na ekwesịrị ịdọpụ eriri aka ma ọ bụrụhaala o kwere mee n’oge ị na-ejide nkwojiaka aka maka ikuku. Agbanyeghị, a chọghị nke a n'ọnọdụ niile. Iji maa atụ, mgbe ịchọrọ ịmechaa ọtụtụ ọzụzụ, ị ga - ewepụtụ nkwado aka gị iji jide n'aka na ọbara na - agafe.
Nke gara aga: Nkwado nkwonkwo ụkwụ
Osote: Nkwado ikpere
Nkwonkwo isi mkpịsị aka aka
Padded azụ nkwado
Ikike iweli aka dị elu
Ọla ọcha ion mkpuchi eriri